Miezaka ny hitady an'io mpiasa voan'ny tandindonin-doza PBS io avy any Den Kolder: Martin Vrijland
Miandrandra fatratra ity loza mitatao amin'ny aretina PBS-er (tambajotra matihanina) amin'ny klika any Den Kolder. Azafady mba tsarovy izao fotoana izao tsy misy lalao lalina! Tamin'ity indray mitoraka ity dia tsy misy PsyOp (fiasa ara-psikolojika) hanosika ny lalàna vaovao.
Mazava ho azy fa izany no fanehoana an'i Mark Rutte sy ny toeram-pambolena vaovao Nandositra ny TBS avy amin'ny klinika tao Michael P. ao Den Dolder, saingy mety ho mazava tsara hoe ahoana no ahafahanao manao olona tsy misy olona amin'ny alalan'ny rindrambaiko tsotra. Ity sary nalaina ity dia nitondra ahy minitra ofisialin'ny 10 (via ity tranonkala ity) ary mamporisika anareo aho hamaky ny lahatsoratra etsy ambany mba hahafantarana ny fomba hampiharana izany teknika izany ho an'ny ankamaroan'ny vaovao hosoka.
Ankehitriny dia misy rindrambaiko eny an-tsena ihany koa izay ahafahanao manao tafatafa mivantana avy ao ambadiky ny webcam (na eny an-dalambe, amin'ny alàlan'ny greenscreen) eo amin'ny solosaina mahazatra ary mametraka ny endrika sy ny feo hafa momba izany. Izany dia atao amin'ny fotoana tsy misy ary tsy misy fanelingelenana. Azonao jerena eto ity (vakio ny lahatsary).
Ny haino aman-jery dia naharesy lahatra anay fa marina daholo izany, saingy tsy ho afaka hanamarina izany mihitsy izahay ary tsy maintsy mihevitra isika fa tsy milalao miaraka amin'ny teknikan'i Hollywood. Ny vokatr'izany dia azon'ny olona atao ny miala amin'ny sivily tsy amin'antony ary mety hanjavona ao anatin'ny fahatsapany ny fiainany, satria tsy miaro azy ireo intsony ny lalàna. (Vakio ny eto ny fandrosoana)
Lisitry ny rohy loharano: faceswaponline.com, telegraaf.nl
Tags: Anne, ny, dolder, Faber, Featured, toeram-pitsaboana, klinkiek, Michael, vaovao diso, afa-nandositra, afa-nandositra, P., Pan kay, tbs, tbser
5 June 2019 ao amin'ny 20: 19
Izy io ihany no Dekker izay manandrana manafoana ny fanampiana ara-dalàna, noho izany dia nahazo ny baikony ny tompony .. beefehl ist befehl. Tamin'ny voalohany dia nihevitra aho fa nandositra ny hadalan'ny Tom van Hek i Hek
5 June 2019 ao amin'ny 20: 24
Nampahatsiahy ahy manokana an'i Leo Blokhuis ilay sary. Angamba izy ireo no nampiasa azy io ho ohatra ho an'ny lalina lalina lalina?
5 June 2019 ao amin'ny 20: 29
Ny maso dia nampahatsiahy ahy an'i Tom van 't Hek ... voalohany fitaomam-panahy.
5 June 2019 ao amin'ny 21: 07
Tena zava-dehibe io hafatra io, satria midika izany fa hanomana lalàna izy ireo izay hikorianan'ny olona fotsiny. Noho izany, ny fanesorana ny fialan-tsasatra.
5 June 2019 ao amin'ny 21: 08
Goelag dia gulag ary tsy maintsy mijanona ao fotsiny ianao mandritra ny androm-piainanao amin'ny maha-mpanohitra azy.
5 June 2019 ao amin'ny 20: 32
... na ny iray noho ny BN'er satria izany dia miteny tsy am-pisalasalana. Azonao antenaina fa handany fotoana bebe kokoa izy ireo hanomana deepfake azo antoka ho an'ny mpandinika tsikera 😀
5 June 2019 ao amin'ny 20: 35
.. ankehitriny dia heveriko ho matotra bebe kokoa mikasika ireo fifandraisany amin'ny Brech, ny volombava, ny mena sns = = NLP
5 June 2019 ao amin'ny 20: 42
5 June 2019 ao amin'ny 20: 49
Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Tsongan-Dahatsoratra Nadika Dikantsoratra Ny farany an'i Jos B dia nandefa 8 ora lasa izay ho an'ny fampahalalam-baovao toy ny RTL, SBS. Ity sary ity dia 8 ora ora ary ny fananana ny Talpa Networks (De Mol)
5 June 2019 ao amin'ny 20: 55
Izy ireo, ireo lehilahy avy ao amin'ny script, dia tena tsy miezaka mafy hanao ilay mpitsikilo azo itokisana. Voalohany aloha Manana ny fahefana izy ireo. Iza no afaka haka an'i Hen? Izy ireo dia manana toerana manan-danja. Ankoatra izany, fantatr'izy ireo fa ambany ny iq amin'ny mpandoa hetra Neanderlander. Ireo izay manana izany dia mihazona am-pahendrena ny vavany satria izy ireo dia anisan'ny Club ao Neanderland izay mamaritra ny zava-drehetra.
Tsotra fotsiny amin'ny famitahana ny endrikao ary amin'ny alalan'ny vatofantsika / tsangambato izay avy amin'ny 'governemanta' ny famokarana Spyop / teatra, dia lasana ny fisainana mitsikera ny Neanderlander. Raha manao programa ianao amin'izao fotoana izao! Ny atidoha ampiasain'ny atidoha dia manome ny mpanolotra ny ankizilahy avy ao amin'ny script, tsy manefa ho an'ny inona izy ireo, izay manely ny tarehiny mitory ny hevi-doha ary avy eo ny fisainana mitsikera dia voavela heloka. Fa na dia mivoaka ny koma aza ny Neanderlander ary mieritreritra fa misy zavatra tsy mety eto. Inona no hataony, azony atao ary rehefa fantany fa hiverina ao anaty cona izy. Tsara ny andro, andevo. Ireo ankizilahy avy ao amin'ny script dia mihomehy ao ambadiky ny sehatra.
6 June 2019 ao amin'ny 18: 10
hahaha ary tampoka eo amin'ny masony ankehitriny, inona no tianao holazaina?
6 June 2019 ao amin'ny 00: 07
Raha manana porofo ianao fa tsy misy i Sinterklaas, dia mbola mila mino ireo ankizy fa misy izy io, satria izany no tokony ho izy ary tsy tokony hanelingelina anao izany, fety izany, avelao ny ankizy irery.
Mazava ho azy fa tsy tian'ny vahoaka ny fitsaboana amin'ny famonoan'olona eny an-dalambe, fa ankehitriny dia ny mpiray monina hafa no entina eo ambanin'ny anarana iray.
Fitenenana efa ela: mampitaha ny paoma amin'ny pears.
Ny famaranana ny teny maimaimpoana ato amin'ity lahatsoratra ity avy amin'ny telegraaf izay amoahan'izy ireo ny fanomezam-boninahitra ny Nazis eo ambanin'ny anarana iray.
Tena hafahafa ho an'ny fahalalaham-pitenenana sy fikarohana.
6 June 2019 ao amin'ny 06: 21
Tsy hanala sary sy fampielezan-tsivana Nazi izy ireo. Matetika izy ireo no mamoaka sy mizara ity vaovao ity. Amin'ny farany dia mila boogeyman izy ireo. Cry wolf.
6 June 2019 ao amin'ny 09: 16
Farafaharatsiny dia nikarakara mpilalao sarimihetsika tsara izy tamin'ity indray mitoraka ity ...
Mazava fa ny lalàna vaovao tokony hampidirina.
Ny anabavy dia tia ny ain'ny rahalahy, fa mitsidika azy tsy tapaka any amin'ny toeram-pitsaboana. "Hitanao fa azo antoka, miteny aho fa izany no fahadisoana lehibe indrindra azonao atao" dia angamba mety ny mety indrindra amin'izany. Mila mihidy ny varavaran-dreniny, satria te hampalahelo azy ny rahalahy. Fa mitsidika isan-kerinandro isika (satria raha mahazo ny fanafany ihany izy dia tsara).
6 June 2019 ao amin'ny 09: 24
Avy ao amin'ny minitra 19e, Jeroen Pauw dia maneho antsika ny rindrambaiko aty amin'ny biraon'ny famoahana azy. Tsy misy olana amin'ny fampitomboana ny olona iray.
Tsy misy olana ve ny hametrahana anadahin-java-tava (sangisangy) anabavy?
6 June 2019 ao amin'ny 09: 44
Tahaka an'i Rutte! Nampiasa ny mason'i Rutte izy ireo! Mba hampisehoana fa fantany fa sahiran-tsaina izy! Mianjera ny lamasinina! Tsy maintsy hiatrika ny lalàna momba ny toetr'andro (horror) ihany koa isika!
6 June 2019 ao amin'ny 11: 11
Efa namaky ny zavatra nosoratako ve ianao? Nataoko sary toy ny persiflage ity sary profil ity. Vakio fotsiny ny votoatin'ilay lahatsoratra fa tsy mamaly fotsiny ny sary.
6 June 2019 ao amin'ny 11: 17
Tsy nahavaky ireo trolls of hasbarra, te-handefa loha-hevitra fotsiny izy ireo. Angamba iberi dia misy entana mivoaka amin'ny fivarotana 😀
6 June 2019 ao amin'ny 10: 56
Ny mpivarotra sary ihany dia ho an'ny De Mol sy ny namana, ny sisa dia nesorina.
6 June 2019 ao amin'ny 17: 03
Soa ihany fa manana an'i Peter M .. Tena fanamaivanana ho an'i Neanderland. Mialà sasatra tsara mandra-pialan'ny safidy manaraka. Firenena iray, andevo izay mino ny zavatra rehetra lazain'ny rainy.
« Jos B. (Nicky Verstappen) PsyOp ampiasaina ankehitriny mba hangataka fanambarana amin'ny mpanjifa amin'ny mpisolovava?
Peter M. (avy amin'ny rahavavy mahatoky mankany Jeroen Pauw) dia nosamborina indray »
Total visits: 12.205.731